Manana Cavendish ve ny Tour de France amin'ny taona 2020? - Mark Cavendish
Tena > Mark Cavendish > Olimpika Cavendish - valiny tsotra amin'ny fanontaniana
Olimpika Cavendish - valiny tsotra amin'ny fanontaniana
Manana Cavendish ve ny Tour de France amin'ny taona 2020?
marikaCavendishdia niverina ao amin'nyny Tour de France. nomenanytolona nandalovany tato anatin'ny taona vitsivitsy, zava-bita mahatalanjona izany - ary ny iray toa tsy dia nisy toa zazalahy akorynyIsle of Man mandresy dingana 30 amin'ny hazakazaka bisikileta lehibe indrindra.26. 2021.
Raha tsorina, ny Tour de France no hetsika bisikileta lehibe indrindra amin'ny vanim-potoana, natao tamin'ny volana Jolay. Ao amin'ny Tour, ny mpitaingina tsara indrindra eran'izao tontolo izao dia mifaninana amina dingana 21 manerana an'i Frantsa amin'ny vidiny farany amin'ny bisikileta Ny akanjo mavomavo mavo izao, raha mbola tsy nahita hazakazaka am-bisikileta talohan'ny Tour ianao, dia mety hampifangaro hazakazaka mandritra ny telo herinandro isan'andro Mpandresy samy hafa ary maro loko maro karazana Jersey no sarotra harahina, noho izany dia hofongarantsika ity torolàlana ity ho an'ny Tour de Frost. Ny Tour de France dia iray amin'ireo fitsidihana bisikileta telo tsara ary? ny hazakazaka malaza indrindra amin'ny kalandrie tsy misy fanontaniana satria ny mpandresy ny Tour de france dia misy dingana 21 miparitaka mandritra ny telo herinandro izao dia omena ny dingana tsirairay, ny mpitarika ny hazakazaka ary ny mpandresy amin'ny ankapobeny dia tapa-kevitra fa ny fotoana nanodinana azy rehetra dia izao no resahina ao ankoatry ny laharana ankapobeny ho laharam-pahamehana na fanasokajiana ankapobeny ny gcas, izay resahina amin'ny ankapobeny, no voalohany miampita ny tsipika fahatongavana amin'ny dingana tsirairay no satro-boninahitra ilay mpandresy an-tsehatra Ny fitsangatsanganana dia matetika misy andro fitsaharana roa tsy misy hazakaza-tsoavaly, na dia mivoaka aza ireo mpitaingina ary manao andilanana mba hitazomana ny tongony, saingy maka andro tsy fiasana izy ireo anio mba hahazoana antoka fa afaka miverina ny mpitaingina azy ireo mba hahafahany mitaingina mafy araka izay tratra mandritra ny andro ho avy mba hampientanentana ny hazakazaka ankehitriny. ny fizahan-tany dia nanomboka ny taona 1903 miaraka amin'ireo fiatoana sisa taorinan'ny ady lehibe voalohany sy faharoa tany amin'ny firenena mifanila toa an'i Belzika, Netherlands, Grande-Bretagne ary any an-kafa, ankehitriny ny dingana voalohany amin'ny hazakazaka mazàna atao eto amin'ity firenena ity, nefa avy eo dia mandeha mankany Frantsa izy ireo ho an'ny fiandohana fantatra amin'ny anarana hoe Grand Departall, manao ny Tour de France dingana iray amin'ny dingana dimy samy hafa sokajy voalohany fisaka dingana ireo dingana ireo matetika manana fironana kely ary ampiasaina hifindra ny hazakazaka eo anelanelan'ny tandavan-tendrombohitra manerana ny tanànan'ny frantsay, ankehitriny dia matetika izy ireo no mandresy amin'ny alàlan'ny manam-pahaizana antsoina hoe sprinters, izay manana hafainganam-pandeha mihoatra ny 70 kilometatra isan'ora raha mihazakazaka mankany amin'ny tsipika fahatongavana any amin'ny toerana lavitra be ianao, dia azontsika ny dingana an-tendrombohitra izao ny dingana an-tendrombohitra ny fitsangatsanganana no zava-dehibe sy ny ampahany amin'ny hazakazaka izay te-ho tonga mpijery sy mpanafika ireo dingana ireo dia miparitaka eo anelanelan'ny alps frantsay sy ny pyrenees ary ireo dingana ireo dia hita ao anatin'ny telo herinandro metatra fiakarana an'arivony maro dia azonao atao ny mifarana amin'ny tendrombohitra goavambe ho toy ny toerana tamponanan'ny tampon'isa na indraindray aorian'ny fihazakazahana midadasika aorian'ny fiakarana lehibe miakatra ireo dingana ireo dia tena mampientanentana foana ing ary matetika izy ireo dia mpanapa-kevitra lehibe amin'ny fizahan-toetra amin'ny ankapobeny raha te handresy ny fitsidihan'i Frantsa ianao dia tokony ho andrana amin'ny fotoana tsara Midika izany fa mihazakazaka mifanohitra amin'ny famantaranandro, satria ezaky ny tsirairay ao anatin'ny vanim-potoana iray izay isian'ny mpamily tsirairay ao anatin'ny elanelam-potoana fohy iray minitra aorian'ny iray hafa, mazàna ny mpamily dia mampiasa bisikileta sy fitaovana aerodynamika manokana hahafahan'izy ireo mitaingina haingana araka izay azony atao amin'ny fotoana hafa mety hitranga amin'ny faritra rehetra, manomboka amin'ny lalan-kely mankany amin'ny faritra be havoana ary na ny fiakarana an-tampon'ny havoana aza dia manome fotoana mety ho an'ny filaharana amin'ny ankapobeny mba hampiasa fotoana betsaka amin'ny mpifaninana. Ny fisedrana ny fotoana ekipa dia atao amin'ny endrika mitovy amin'ny fisedrana fotoana tsirairay en fa entin'ny ekipa iray manontolo izy ireo ankehitriny, ny ekipa rehetra dia mihodina ary mitondra fiara miforona amin'ny sary an-tsaina ny vorona mifindra ao amin'ity endrika V lehibe ity izay manampy amin'ny famakiana ny rivotra sy hitazomana ny hafainganam-pandeha. haingana be haingana toy ny ekipazy amin'ny tsipika farany araka izay azo atao.
Ankehitriny ny ekipa iray manontolo dia manomboka miaraka ary ny fotoana farany nomena dia ny mpitaingina fahadimy niampita ny tsipika fahatongavana, saingy mazàna dia manomboka amin'ny mpitaingina valo izy ireo. Ka rehefa manana mpamily valo mihena telo dia dimy izy ireo, ka mazàna manana mpamily telo manao izay azony atao. Izahay matetika dia mamadika an'i Calla ary mandoro tsara, handeha lalina izy ireo raha toa ka hiala eo akaikin'ny tsipika fahatongavana izy ireo, mba hamelana ny ekipany hitohy tsy misy azy ireo, ireo mpitaingin-tsoavaly ireo matetika dia mihodina amin'ny hafainganam-pandehany, matetika ho sorona ho an'ny mpitarika ny ekipany, ankehitriny ny fitsaram-potoana amin'ny ekipa dia toa marina toy ny masinina voahosotra tsara manana tombony lehibe kokoa noho ny cadres hafa izay mampiasa ity karazana hetsika ity, ny mpandresy amin'ny Tour de France dia mpitaingina tokana miaraka amin'ny totaliny ambany indrindra fotoana amin'ny fiafaran'ny dingana faha-21, izay nifarana teo amin'ny Champans-Elysees malaza any Paris hatramin'ny taona 1975, ny vondrona mpitaingin-tsoavaly marobe amin'ny fitsangatsanganana dia fantatra amin'ny anarana hoe peloton thepelotonis dia ahitana ekipa 22 misy mpamily valo tsirairay avy, misy mpamily 176 avy amin'ny voalohany.
Ny ekipa tsirairay dia misy mpitaingin-tsoavaly tsara indrindra mandrafitra ireo iza amin'ireo superstars bisikileta isan-taona. Ireo ekipa 22 ireo dia misy ny ekipa Top Tier World Tour tsirairay avy ary koa ekipa pro-kaontinantaly ambaratonga faharoa miaraka amin'ireo ekipa mpiaro kaontinanta wildcard ary heverina ho kely kokoa izy ireo, na dia manana ekipa tsara aza ireo ekipa superbig ho an'ireo ekipa manohana- ekipa kaontinantaly haneho ny mpanohana azy amin'ny hazakazaka lehibe indrindra amin'ny vanim-potoana, hifaninana amin'ny ekipa Bigworld Tour ary mety hisarika ny scout talenta izay mitady hanao sonia azy ireo amin'ny fitsidihana an'izao tontolo izao amin'ny vanim-potoana ho avy dia mpamily mpomba ny kaontinanta no hanafana ny hazakazaka amin'ny làlambe mba hanomezana fiheverana bebe kokoa ireo mpanohana azy, araka izay tratra, izao dia matetika ny ekipa dia hifantoka manodidina ny mpamily iray na roa voatondro ho ekipa mpitarika ny ekipa dia mikendry olona tsirairay Mba hahazo dingana na kandidà fanasokajiana ankapobeny izay ny tanjon'izy ireo dia ny mandresy amin'ny Tour de France, amin'ny ankapobeny, ary koa ny mpitarika ny ambiny. Ny ekipa dia misy trano fonenana, izay midika ara-bakiteny ho an'ny mpanompo ao an-trano ankehitriny ho fanohanana ny te mpitarika aho, mahafoy ny fahafahany mitarika ary manampy ny ekipa hahatratra ny olon'ny Toredomestiq matetika mitaingina ny lohan'ny vondrona hampiadana ny hafainganam-pandehany. Ny fanafihana dia mampihena ny mpitarika amin'ny rivotra, mba hitehirizana tanteraka ny angovo an'ny mpitarika dia mitahiry ny lalana tsy ahatongavan'ny fiaran'izy ireo, manome azy ireo bisikileta na bisikiletany hamerina azy ireo haingana araka izay azo atao Mba hitondra hazakazaka, raha dingana iray dia tsy manana afa-tsy mpandresy iray ary ny fitsangatsanganana dia resin'ny mpamily iray fotsiny amin'ny totalin'ireny fandresena ireny dia vokatry ny fiarahan'ny ekipa mpilalao ekipa valo tsy misy kilema, tsy misy olona afaka mandresy ny fitsidihana azy irery fa tsy azo atao ilay ohabolana taloha. Ny fanaovana ny nofy ho fahombiazana amin'ny fitsidihana dia kaleidoscope miloko tsara tarehy mihodinkodina manerana an'i Frantsa ity fifangaroan'ny jerseys ho an'ny tanora vita amin'ny sary miloko mpanentana ity amin'ny loko miloko dia tena fijery eo amin'ny akanjo anaovan'ny ekipa mahazatra hitanao izao ary ny fahazoana ny fitafiany. Ho hitanao ny akanjo lava efatra tena lehibe izay miafara amin'ny tsirairay Ny lobaka mavo Le Mayo Jean no akanjo manavanana sy manan-daza indrindra an'ny mpitaingina Tour de France miaraka amin'ny fotoana voangona ambany indrindra mandritra ny vanim-potoana ka hatramin'izao, mavo ny jersey, noho ny gazety frantsay Auto, izay nanao doka momba ny hazakazaka tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-20, natao pirinty tamin'ny taratasy mavo tsy azo diso izy io; izao na iza na iza manao ity akanjo ity amin'ny faran'ny dingana 21 dia handresy ny Tour de France mandritra ny androm-piainana fanajana avy amin'ny mitovy taona aminy sy ny mpankafy azy ary miaraka amin'ny vola mitentina 500.000 euro ny jersey fotsy le Mile Block ilay akanjo fotsy no manondro ny mpamily tanora mahay indrindra ny hazakazaka ity no mpamily napetraka tsara indrindra amin'ny filaharana ankapobeny eo ambanin'ny 25 Janoary voalohany amin'ny taom-pilalaovana tsirairay 'azo atao mba hitazomana ny akanjo mavomavo ary ny lobaka fotsy amin'ity tranga ity dia ny akanjo mavo mavo no hatao laharam-pahamehana amin'ny laharana faharoa ho an'ny tanora mpitaingin-tsoavaly ny filaharana ankapobeny manao ny akanjo fotsy rehefa faran'ny fitsidihana ny mpamily tanora tsara indrindra mitondra mody 20 000 Euros. Ny akanjo maintso antsoina hoe Lumaio ver no jirama sprinter mandritra ny hazakazaka Points dia nomena ny mpamily voalohany hiampita ny tsipika fahatongavana isan'andro misy ny misy Nomena isa na izany aza, arakaraka ny ambaratongan'ny andro, ankoatr'ireo teboka ireo, ny lalan'ny isan'andro dia tototry ny antsoina hoe sprinter antenantenany izay tonga alohan'ny tsipika fahatongavana, ka ny hazakazaka mahaliana hatrany.
Ny isa hazakazaka am-panombohana dia omena ho an'ny sprint mpanelanelana ary koa ny hazakazaka hazakazaka ary ny mpamily manana isa betsaka indrindra amin'ny faran'ny hazakazaka mitafy ny akanjo maintso izao dia mazàna na anaovan'ny sprinter iray izay manangona isa rehefa izy mandresy dingana ary mifarana matetika amin'ny 15 ambony amin'ny dingana tsy resiny ary any an-tendrombohitra avo miady ho an'ny Outliers dia azonao atao ny miantoka ny sprinter antenantenany amin'ny andro tsy anaovanao Ny vidin'ny jirna maintso dia dimy arivo sy roa alina euro. , ny jersey la moi poirous misy teboka amin'ny fomba mitovy amin'ny naman'ny ambaratonga antonony, eo an-tampon'ny isan'ny fiakarana lehibe, ho an'ireo mpitaingina vitsivitsy voalohany hahatratra ny tampony, ny isan'ny isa azo arakaraka ny fanasokajiana ny fiakarana. Arakaraka ny maha-sarotra ny fiakarana no betsaka ny isa atolotra Ny mpitaingin-tsoavaly manana teboka an-tendrombohitra betsaka indrindra no mitafy ny akanjo lava ary mitentina 25 000 euro any aminy any amin'ny faran'ny fitsidihana. Andao hiresaka momba ny sprintersSambatra matetika mikendry ny handresy dingana fisaka miaro tena amin'ny rivotra ao ambadiky ny mpiara-miasa aminy tontolo andro manandrana mijanona eo an-tampon'ny avo, hisoroka ny korontana, hisorohana ny fisaratsarahana ateraky ny fizarana teknika, ny fiovan'ny làlana, ny fianjeran-drivotra midona amin'ny karazan-javatra rehetra, ny sprinters ara-bakiteny fa rehefa manenina izy ireo, tsy mikasika ny rivotra velively izy ireo ary manaloka eo anoloana indrindra ny peloton hatrany amin'ny metatra farany izay, avy eo aorin'ireo mpiara-miasa aminy izay nitondra fironana lehibe hamaky ny fandresena hahafahan'izy ireo mihazakazaka haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha afaka mamokatra herinaratra betsaka na dia mandritra ny fotoana fohy aza ary haingana dia haingana izy ireo. Ny maha-sprinter anao dia asa tsy manam-paharoa sy mampidi-doza. ilay iray mitovy famaritana amin'ny faran'ny sprinters fitsangantsanganana matetika dia ora ambadiky ny mpandresy ankapobeny amin'ny filaharana ankapobeny mety nahazo fandresena maro izy ireo nandritry ny fizotran'ny fizahan-tany dia azon'ireo manampahaizana mihanika madio ireto mpitaingin-tsoavaly ireto manao asa ambony amin'ny fiakarana ary izy ireo manao mpihanika haingam-pandeha matetika dia mpitaingina mikendry ny handresy ny fitsangatsanganana ankapobeny, Fa misy ihany koa ny mpihanika amin'ny hazakazaka izay tsy liana amin'ilay akanjo mavo.
Iray ihany ny tanjon'izy ireo: ny mandresy ny fahatongavan'ny tampon'isa sy ny tendrombohitra. Ankehitriny ny mpitaingina te-handresy amin'ny fitsidihana iray manontolo dia tsy maintsy mahay mihanika tendrombohitra tsara ary manana ny fahafaha-mamorona banga marobe amin'ny ligy ary hahatonga ny mpifaninana ho very fotoana betsaka amin'ny filaharana ankapobeny ao anatin'ny tokana iray. Ny fitsapana ora dia zava-dehibe indrindra amin'ny hazakazaka an-tsehatra matetika hisy farafahakeliny indray mandeha isaky ny fanontana ny tour de france, fa ny sasany kosa ampiana roa na telo na mihoatra ny ankamaroan'ny mpitarika ny ekipa nanao ny naoty ankapobeny ny Mba handehananao fitsangatsanganana dia manana ianao mba hahafahana mamoaka fitsapana amin'ny fotoana mety dia maharitra eo anelanelan'ny 30 minitra ka hatramin'ny adiny iray ny mpitsara ary ny mpitaingina manana ny mety handresy ny mpifaninana aminy minitra raha toa ka tena mahay iray izy ireo. tombony lehibe noho ny mpifaninana Agc izay tsy miankina amin'ny fiakarana haingana any an-tendrombohitra fotsiny mba ahazoana fotoana izao ankoatra ny fotoam-pitsarana manolotra bonus isan'andro ho an'ireo mpamily telo voalohany manerana ny tsipika fahatongavana maka enina d segondra efatra ho an'ny laharana voalohany, faharoa ary fahatelo. Manaraka izany dia ny pelotone vehivavy, fitsangantsanganana maharitra telo herinandro dia tanterahina any girorosa, hazakazaka an-tsehatra 10 andro izay manomboka amin'ny volana jolay, koa ny orinasa mandamina ny famindram-pizahan-tany dia mandamina ihany koa ny hazakazaka iray andro fitsangatsanganana vehivavy , d hat dia nitazona tamin'ny làlana iray ihany toy ny dingana amin'ny hazakazaka lehilahy nandritra ny taona maro.
Ity dia làlana fisaka iray manodidina ny champ-elyseesin paris izay matetika no notapahan'ny vondrona sprinters manoloana ny bisikileta vehivavy mandrakizay ary ho dingana lehibe mankany amin'ny fanatanjahantena tena mitovy ary fantatro manokana fa ho zavatra tsy mampino izany. raha mahita an'io ary ho velona ok dia manana ny lesoka aho, ahoana no fahitako an'io? ny toerana tena tianay hijerena ireo mpizahatany amin'ny hazakazaka gcn mazava ho azy, fa angamba somary mitongilana ihany isika fa manana ankoatry ny fitsangatsanganana dia manana hazakazaka lehibe maro hafa mandritra ny taona isika, saingy vaovao ve ny gcn? Race Pass dia manana ny zavatra rehetra tadiavinao, manana karazana endrika rehetra toy ny mombamomba ny sehatra, lisitra fanombohana, fanasongadinana isan'andro aorian'ny famakafakana hazakazaka sy zavatra tsara maro hafa, manana ny zavatra rehetra ilainao izy, na mpijery za-draharaha ianao na fanatanjahan-tena voalohany amin'ny hazakazaka bisikileta dia noho izany ny fizotran'ny Tour de francethe lehibe indrindra ny hetsika lehibe indrindra amin'ny taona manerantany amin'ny bisikileta dia fanombohana tsara ny fitsidihana raha mbola tsy nahita hazakazaka bisikileta ianao taloha raha tianao Ity lahatsoratra ity, omeo rivotra izahay ary raha fantatrao fa misy olona mandeha bisikileta amin'izao fotoana izao ary mety liana amin'ny hazakazaka bisikileta sy ny fitsangatsanganana. Alefaso amin'izy ireo ity lahatsoratra ity mba hampientanentana azy ireo, misaotra nijery ary hahita anao amin'ny manaraka izahay
Firy taona i Mark Cavendish?
MARK CAVENDISH: Nanomboka nandeha bisikileta aho nefa tsy fantatro izay nataon'ny pro - Roubaix rehefa nandresy i Servais Knaven tamin'ny 2002. Tadidiko fa avy ny orana ary maloto izy ireo. Ary lavo ireo zazalahy.
Nandeha lavitra lavitra tamin'ny tanjona i Knaven. Izy irery no nanana an'io toerana ambany io, tsy avy amin'ny rano nalatsany mihitsy. Ary tonga tao amin'ny velodrome izy ary nametaka ny akanjony mba hanondroana ny mpanohana izay ekipako ankehitriny.
Tsy izany dia ilay dingana haingana an'ny Etixx, fa mbola dingana haingana. Ary nandresy izy ary tena tsara izany. Nanomboka teo dia izaho no tiako ho kilasika.
Afaka mandresy an'i Roubaix aho indray andro. Tena heveriko fa hazakazaka mbola nofinofisiko. Iray ihany ny mpamily izay noheveriko fa izy aho.
Ary i Johan Museeuw izany. Raha teo amin'ny vatolampy kely aho, dia mody nilaza fa izaho dia Johan Museeuw. Tonga tany aminy izy telo na efa-taona lasa izay ary nilaza fa zanako lahy mihazakazaka izao, fa ianao kosa dia sampy.
Ary nieritreritra aho fa hafahafa izany ary notantaraiko azy ity tantara ity. Heveriko fa ny faritra samihafa dia maneho fihetseham-po samihafa, antony samihafa mahatonga azy ireo ho lasa sary famantarana. Ny fomba fijery ny bisikileta amin'izao fotoana izao dia ny fandrosoany fa mitazona izany singa nentim-paharazana izany ianao.
Hitanao ny sary masin'ny Moser ao Roubaix miaraka amin'ilay akanjo lava miloko telo. Mirongatra izao karazan-jaza izao ary notehiriziny tsy hampiato azy ny pataloha volony. Ho ahy dia tamin'izay fotoana izay ny bisikileta no fanatanjahan-tena mahazatra indrindra eto an-tany.
Ny ankamaroan'ny fahatsiarovana mampiavaka ny bisikileta nandritra ny taonjato maro dia avy amin'ireo karazana taona ireo. Ary tantara ireo - mazava ho azy fa any Tuscany isika izao ary ny tantara avy any Coppi sy Bartali, manan-tantara izy ireo, mampiavaka azy ireo. Heveriko fa ity dia misy ifandraisany betsaka amin'ny fiainana izay misy ifandraisany bebe kokoa amin'ny fanatanjahantena.
Eny, fitopolo taona lasa izay ankehitriny. Betsaka ny zavatra azo alaina amin'ny zava-drehetra. Rehefa nitaingina an'i Merckx i Eddy dia tsy noeritreretiny izany, manana pataloha fohy volon'ondry aho tamin'izay.
Fa rehefa mijery ny jery todika ianao, dia henjana be. Ny ankamaroan'ny mpitaingina taona maro dia misy zavatra itovizany, ny hoe tena tia mandeha bisikileta fotsiny izy ireo. Misy fomba hanosehana ny tenanao amin'ny bisikileta izay tsy tsapako hoe afaka miditra amin'ny karazana fialamboly na fanatanjahan-tena hafa ianao.
Raha vao nanomboka nitaingina bisikileta aho dia tsy mihoatra ny toerana manokana. Tsy dia olona firy no nanao an'izany. Ary ankehitriny dia misy fiakarana toy izany eo amin'ny bisikileta any Angletera izay mahatalanjona tokoa ny mahita azy.
Mahagaga ny mahatsapa anisany. Mbola kely ny olona dia manao an'io. Manaraka ny fanatanjahantena ny olona.
Mbola jerena ho toy ny fanatanjahan-tena amin'ny kilasy fiasan'ny olona izany, milaza fa tokony nanao izay tokony nataonao izao ianao. Tena mahatsikaiky. Zavatra iray azonao avy amin'ny olona manao izany, izy ireo dia afaka manaja izay ataontsika amin'ny maha matihanina antsika.
Folks-- misy olona tsy mitaingina bisikileta na mijery azy amin'ny fahitalavitra, tsy fantatr'izy ireo hoe henjana toy inona ny bisikileta. Saingy tsy maninona na dia mandeha miasa aza ianao na miaraka amin'ny fianakavianao, mba hankafizanao ny pedal dia azonao atao an-tsaina hoe manao ahoana ny mandeha 3.500 kilometatra manerana an'i Frantsa. Mahazo olona 200 amin'ny hazakazaka bisikileta ianao fa tsy amin'ny tontolo voafehy.
Ny isan'ny miova dia saika tsy manam-petra. Raha mikarakara ny miovaova ianao na amin'ny fiainana na amin'ny bisikileta, dia mandeha amin'ny alehanao ny zava-drehetra. Raha manao ny tsara rehetra aho hiomanana amin'ny hazakazaka, ny tsara indrindra azontsika atao, dia manana vintana tsara kokoa ianao hahita fahombiazana.
brevard nc bisikileta an-tendrombohitra
Ny adihevitra mitohy momba ny hoavin'ny bisikileta. Amin'ny maha mpankafy bisikileta anao dia tsy tena maniry ny hahita zavatra miova ianao. Tian'izy ireo ny hahita ny fitsangatsanganana lehibe amin'ny maha-izy azy.
Tian'izy ireo ny hijery ny kilasika, mihazakazaka amin'ireo hazakazaka izay efa 100 taona lasa izay. Fa amin'ny farany, ny fanatanjahan-tena hafa, ny ankamaroan'izy ireo toa ny World Series, dia mora jerena. Ary heveriko fa tsy maintsy mandeha amin'izany lalana izany.
Handroso bisikileta izany.
Mbola any Tour de France 2021 ve ny Cavendish?
Indray mandeha indray ny36-Cavendish taloha, namafa ny hatsembohana sy tomany, nampisavoritaka ireo nanoratra azy, rehefa avy naka ny fandreseny fahefatra tamin'ny hazakazaka tamin'ity taona ity izay saika nijanona tamin'ny fanatanjahantena tamin'ny faran'ny taona 2020. Tour de France 2021: nandresy i Mark Cavendish dingana faha-13 hamatotra ny rakitsoratr'i Merckx mivantana!18
Dingana lehibe misy fanafihana misesy ao anatin'ny vondrona tianao indrindra ary ady iray nambaran'ny fanasokajiana ny tendrombohitra. Rivotra sy haavony no hita manasarotra ny fihetsika ataon'ny bisikileta. Ary mpandresy izay, aorian'ny 10 taona tsy nisy fandresena tamin'ny hazakazaka, dia nitondra fandresena ho an'ny fireneny.
Ny olona rehetra dia tongasoa amin'ity famerenana fohy ity amin'ny dingana faha-dimy ambin'ny folo amin'ity fitsidihana ity tamin'ny 2021. Bauke Mollema dia nandray ny fandresena ny iray andro lasa teo taorian'ny nandraisany anjara tamin'ny fiakaran'ny andro ary nandefa fanafihana azo antoka tamin'ny 43 ny tsipika fahatongavana tamin'ny fanaovana ny fidinana ao nanararaotra ny seranan-tsambo. Omaly, Nairo Quintana sy Michael Woods dia nanome ny toerana voalohany tamin'ny fanasokajiana ny tendrombohitra.
Mark Cavendish dia mbola niakanjo ny akanjo maintso ary Tadej Pogacar dia nijery ny rehetra avy eo an-tampon'ny filaharana, nitarika 4:04 teo alohan'i Guillaume Martin, izay nilatsaka teo amin'ny lampihazo taorian'ny fandraisany anjara tamin'ny fiatoana. Rigoberto Urán, Jonas Vingegaard ary Richard Carapaz dia nitahiry izany fahasamihafana izany nandritra ny dimy minitra. Androany ny tendrombohitra avo dia miverina amin'ny alàlan'ny lalana 191 kilometatra sy tsy fitoviana 4560 metatra izay manomboka ao an-tanànan'i Ceret any Frantsa ary tonga any Andorra.
Sprint iray amin'ny kilometatra 67 dia mahazo isa ho an'ny Jersey maintso ary kelikely taorian'izay dia ny voalohany amin'ireo toerana efatra. Raha vantany vao tafidina izy ireo dia hiatrika fampiroboroboana maro mifanesy. Ny faharoa amin'izy ireo dia mihoatra ny 2.400 metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina ary koa io no toerana avo indrindra amin'ny hazakazaka.
Avy eo hiditra ny faritr'i Andorra ianao ary hitarika indray ny làlana hitady ny 'col de beixalis', izay manome bonus fotoana ihany koa. Ary avy eo ny toerana aleha any Andorra la Vieja amin'ny fidinana 15-kilaometatra mideza. Tsy mandray ny lalao Nacer Bouhanni avy any ArkeaSamsic izy ary mamela ny ekipany miaraka amin'ny mpamily 3 fotsiny 8 izay nanomboka ny hazakazaka tany Brest.
Nairo, Connor Swift ary Elie Gesbert ihany no sisa tavela amin'ny fifaninanana ho an'ny lisitra frantsay. Fiantsoana fanairana ho an'ny Kolombiana izay, raha te hanana faniriana amin'ny fanatanjahantena matihanina izy, dia tokony hieritreritra fiovan'ny ekipa amin'ny vanim-potoana ho avy, satria mazava ho azy fa tsy manana ny fanampiana ilaina hiaraka aminy i Arkea. Raha ny marina dia nahetsika ny tsaho momba ny mety hahatongavan'i Nairo tao amin'ny AG2R, saingy tsy ho ofisialy izy ireo raha tsy vita ny fitsidihana.
Fanandramana marobe hamahana ny fialan-tsasatra amin'ny kilometatra vitsivitsy amin'ny lalana. Voalohany dia i Michael Woods, ChristopherJuul Jensen, Mark Donovan ary ny tompon'ny fandosirana Thomas De Gendt, izay irery nandritra ny minitra vitsy. Taorian'ny tsy fahombiazan'ny fanamafisana, ny mpamily enina hafa dia nanao ny fanandramana vaovao, anisan'izany Imanol Erviti, Pierre Latour ary Dylan Van Baarle.
Ny asfalta dia nampiasaina teo anelanelan'ny fanafihana sy ny fanafihana, hatramin'ny farany tamin'ny kilometatra 25 dia nisy fiatoana izay nahitana mpihazakazaka 32. Araka ny efa nampoizina dia ireo liana amin'ny tendrombohitra no niditra an-tsokosoko voalohany hahazo ny isa. Tao izy ireo, Van Aert, Michael Woods, Wout Poels ary Nairo Quintana.
Ary miaraka amin'izy ireo anarana lehibe toa an'i Ion Izaguirre, Sergio Luis Henao, Dan Martin, ny antsantsa Vincenzo Nibali ary ilay veterana Alejandro Valverde. Ny lalana mamakivaky ilay hazakazaka sprint manokana dia nofaritan'i Michael Matthews, De Gendt ary Ballerini araka izany lamina izany. Ny telo tamin'ireo groupama tonga teo amin'ny fandosirana dia nametraka ny gadona ary manaraka azy ny telo hafa avy amin'ny Segafredo Trek.
Nomena valisoa ny asa tamin'ny fidiram-bola nihoatra ny dimy minitra tamin'izany fotoana izany. Niverina tany an-tsaha ny Emira Arabo Mitambatra naka mora ary nitana haingam-pandeha ho an'ny mpihazakazaka Pogacar. Gadona tsy azon'i Mark Cavendish arahana, izay nanomboka nijaly raha vantany vao nandray ny voalohany tamin'ireo fampiroboroboana efatra izy.
Ny hafanana sy ny fiezahana dia nihaika azy ary tsy maintsy mifehy ny heriny izy mba tsy ho lany fotoana. Manomboka ny ady voalohany amin'ny tondro. Wout Poels, Michael Woods ary Wout Van Aert no nitarika ny lalana ary nihazakazaka nankany amin'ny tampon'ny 'Mont Louis'.
Ny jumbo belza no mahazo dividends tsara indrindra amin'ny fandehanana. Tamin'ity fotoana ity ny fahasamihafana amin'ny lalao lehibe dia efa ho 9 minitra, ary noho ny fitoniana ny peloton, dia saika tsy azo natao ny nilalaovana ny sehatra teo amin'ireo outlier. Ny hafanan'ny hafanana dia manery ireo mpamily hangataka tsy tapaka ny ranon-javatra ho an'ny fiara raha toa ka andro be asa be ny fiaraha-miasa ankehitriny.
Fihodinana faharoa eo amin'ireo mpiady amin'ny seranana teo aloha. Van Aert dia ao amin'ny vondrona lehibe, arahin'i Poels sy Woods. Tsy te hiditra an-tsehatra amin'ity ady ity i Nairo ary mampihena ny toerany.
Mandeha indray ny jet jumbo ary mahazo isa 5. Hanomboka ny fiakarana amin'ny 'Port de Envalira'. Toerana avo indrindra amin'ny fitsangatsanganana amin'ny 2.400 metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina.
Ny fiakarana henjana miaraka amin'ny tsy fisian'ny oxygen dia midika fa lehilahy maromaro avy amin'ny vondrona 32 no nilatsaka. Nanararaotra ny zava-bitan'ny haavony i Nairo ary nanova ny filaminana ho fanafihana voalohany azo valiana. Mihetsika eo akaikin'ny tampon'ny seranan-tsambo indray izy ity ary amin'ity indray mitoraka ity dia tafita ny andrana.
Hanampy anao handingana ny seranana io ary hanampy ireo isa 10 arosony. Fanintelony misesy izao ny kolombiana iray no voalohany nandeha namaky ny tampon'ny fitsangatsanganana. Taorian'ny Superman López tao amin'ny 'col de la loze' tamin'ny taona lasa ary Egan Bernalin tao amin'ny 'Iseran' tamin'ny 2019.
Guillaume Martin no faharoa tamin'ny ankapobeny ka hatramin'izao, tsy afaka nitazona ary nianjera. Miezaka ny manohana ny fiaviana hifandray izy ary tsy afaka manao izany. Ny Ineos sy Movistar dia mahatsikaritra izany ary manome hafainganam-pandeha bebe kokoa aza mba hamoahana an'i Martin amin'ny lampihazo.
Tamin'ny fiakarana ho any amin'ny seranana farany, nanafika an'i Quintana imbetsaka i Nairo ary azo fehezina ny fivoahana roa. Sepp Kuss avy amin'ny jet jumbo sy i Alejandro Valverde no tonga teo amin'ny toerana tamin'ny firaka efa ho telopolo segondra. Toa matanjaka ilay amerikanina ary mahavita misaraka amin'ny baolina.
Mandehana mamaky ny seranana aloha ary raiso ny fidinana miaraka amin'ny tombony azo antenaina izay ahafahanao mihetsika mora foana. Misy fotoana misy fihenjanana ao amin'ny peloton. Maherin'ny 4 kilometatra monja dia nanokana ny tenany hifamono ireo olon-tiana, toy ny hoe faran'izao tontolo izao.
Voalohany, namindra ny vondrona i Carapaz tamin'ny fanafihana izay nakatona i Pogacar tenany. Avy eo dia nanandrana nanamboatra elanelana i Vingegaard indroa, saingy tsy naharesy ny tanjaky ny mpanohitra azy. Ben O'Connor dia nanao zavatra mitovy indroa.
Ary na i Rigoberto Urán tenany aza dia nanozongozona tena ary nanandrana nandroaka. Teo amin'ny lohalaharana, nihanika ny metatra vitsivitsy farany i Sepp Kuss ary nilamina tamin'ny bisikileta nankany amin'ny tsipika napetraka, niampita ny tsipika fahatongavana ary niaro ny fandreseny voalohany tamin'ny fitsidihana sy ny fihodinana faharoa lehibe taorian'ny fitsidihana 2019 2019 avy tany Espana. Valverde goavambe no tonga tamin'ny laharana faharoa, ary ny antokon'i Nairo, Izaguirre, Poels ary DanMartin nitondra tamin'ny 1:15 no nitondra.
Tamin'ny 4:50, tonga ny vondrona niaraka tamin'ny ankafiziny rehetra, ary Guillaume Martin no nanao azy io nandritra ny sivy minitra, ary namoy ny laharana faharoa tamin'ny ankapobeny. Tonga ao anatin'ny fetra voafetra ny Cavendish ary mitohy mitarika ireo teboka. Wout Poels dia nibata ny akanjon'ny tendrombohitra ary Tadej Pogacar dia mbola mitarika ny jeneraly miaraka amin'ny tombony 5:18 mitovy amin'i Urán, izay faharoa ankehitriny. Vingegaard fahatelo amin'ny 5:32 maraina
Richard Carapaz fahefatra amin'ny 5:33 maraina ary Ben O'Connor fahadimy tamin'ny 5:58 maraina
Avy eo dia tonga i Kelderman, Lutsenko, Enric Mas, Guillaume Martin ary Pello Bilbao. Rahampitso andro fitsaharana sy talata antsasaky ny tendrombohitra andro misy pass efatra. Hihaona tsy ho ela amin'ny fizarana 16.
Famihina lehibe ho an'ny rehetra
Fa maninona no naongana i Mark Cavendish?
marikaCavendishscorches handratra fandresena eo amin'ny dingana 13an'ny Tour de France 2021. marikaCavendishNandresynefaeo amin'ny sehatra 13 indrayan'ny Tour de France 2021taorian'ny fampisehoana mahatalanjona iray hafa.1
Mark CavendishTsy misotro ronono fotsinynefa. Raha ny marina, raha ny Manxman no resahina, dia hihazakazaka mandritra ny vanim-potoana 2021 izy. Ny fotoana 30fitetezam-paritraMpandresy an-tsehatra de France dia nanao resadresaka ara-pientanam-po taorian'ny Gent-Wevelgem tamin'ny alahady lasa teo izay nanambarany fa 'izany angamba no hazakazaka farany niasako'.
Ekipa inona no nitaingenan'ny Mark Cavendish?
marikaSimonCavendishMBE dia mp bisikileta manam-pahaizana momba ny hazakazaka amoron-dalan'i Manx teraka ny 21 Mey 1985OMSamin'izao fotoana izaomitainginaho an'ny UCI WorldTeam DeceuninckQuick-Step.
Mbola mihazakazaka ihany ve i Mark Cavendish?
Rehefa avy nandany ody lavafifaninananaany Belzika ary avy eo Torkia,Cavendishdia mankafy fotoana kely miaraka amin'ny fianakaviany any Grande-Bretagne.
Mark Cavendish ve no nanapaka ny fotoana teny amin'ny sehatra 11?
izanydiafandresena amin'ny endrika tafavoaka velona toy nyMark Cavendish dia nanapaka ny fotoana tamin'ny Stage 11nyfitetezam-paritrade France, niambina ny andiany ny ekipany taorian'ny làlana izay nahitana fiakarana avo roa heny an'i Mont Ventoux.3 andro lasa izay
Nahazo medaly olympika ve i Mark Cavendish?
Great BritainMark Cavendishnahatratra ny hetahetanynahazo medaly olympikaamin'ny alàlan'ny fakana volafotsy ao amin'ny omnium.
Iza no handehanan'i Mark Cavendish amin'ny 2020?
Mark Cavendish dia mitainginatamin'ny 2021. Ilay Manxman 35 taona, izay nitaingina Bahrain-McLaren tamin'ity taona ity,dianiverina tany amin'ny fikambanana Deceuninck-Quick-Step, izay nandaniany telo taona talohan'ny asany.05.12.2020